Isimo Esisha Sokusetshenziswa Kwezinjini Zokucinga Martech Zone
NgoLwesithathu, uDisemba 5, 2012 Lwesibili, Disemba 4, 2012 Douglas Karr
Abafundi bebhulogi yethu bayazi ukuthi sikhulu kakhulu abagxeki bokusebenza kwenjini yokusesha ngaphezu konyaka odlule. UFuzz One uhlanganise le infographic emangalisayo, Ubuso obusha be-SEO: Ishintshe kanjani i-SEO, ediliza amasu ngamunye endulo, bese eyiqhathanisa namasu amasha.
Ezinyangeni eziyi-18 ezedlule, izinqubo ze-SEO kanye nesu le-SEO selishintshe kakhulu. Ngenkathi i-SEO isazinze kakhulu njengesiyalo sobuchwepheshe, izinga elibalulekile le-SEO lizama ngokwengeziwe ukubhekela ingqondo yokudala neyokumaketha ethinta izinzwa zabantu NOMA izilaleli izinjini zokusesha ziba ngcono ekuqondeni. Ama-SEO aqala ukucabanga ngezithameli zawo kuqala ngokuqukethwe okubandakanyayo ngaphambi kokusebenziseka kwezinjini zokusesha.
Sicela uthathe isikhathi sokufunda le infographic bese uyiqhathanisa necebo lakho lamanje. Uma une-SEO firm noma umxhumanisi osacindezela amasu amadala, ungahle uthande ukucabanga kabusha ngobudlelwano bakho.
Tags: Ukukhangisa Okuqukethweukwakha isixhumanisinokwenza kahle injini yokuseshaukusebenzisa ngokugcwele injiniamasu okwenza izinjini zokuseshaSesha Marketingseoamasu seoamasu
UKunle Campbell - Fuzz One
Dec 5, 2012 ku-9: 38 AM
Sibonga kakhulu ngokushiwo kukaDouglas - sikubeke ndawonye njengendlela yokufundisa amaklayenti ethu ukuthi i-SEO ibe yinkimbinkimbi kanjani njengenqubo futhi ukuthi imbozwa kanjani ngezinye iziteshi zokumaketha kwedijithali.
Udinga iqembu nobambiswano lwamasu ukuze uphumelele kuwebhu.
Dec 5, 2012 ku-10: 32 AM
Lokhu kuyasiza impela… Ngifunde amabhulogi amaningi we-SEO mayelana nezinqubo namaqhinga amasha we-SEO kepha lokhu okuthunyelwe okwethulwe kahle kakhulu futhi okuqondakala kahle kunakho konke okwedlule .. Ngiyabonga
Dec 9, 2012 ngo-11: 29 PM
I-infographic enhle, iyasiza kakhulu, ikakhulukazi kwabangenayo emhlabeni wokumaketha nokubona abantu abaningi befundisa izindlela ezimbi ze-SEO.
Dec 18, 2012 ku-8: 52 AM
I-infographic ilungele wonke umuntu oqalayo noma ochwepheshe, ngoba uqhathanisa izisekelo ze-SEO ngendlela eqondakala kalula futhi elula. Uhlaka lusenze sicabangele lokho okufanele sikwenze nokungafanele sikwenze. Ukuqhathanisa okulula nokuncomekayo kungenza ngicabange kabusha engikwaziyo nge-SEO nokuthi zisiza kanjani izindlela ezindala manje. Imikhuba emihle iyashintshwa, ngakho-ke kufanele ngishintshe amasu ami wokumaketha esizeni sami se- $ earch. Uma abathengisi nezinkampani bengaphumeleli ukuzivumelanisa, balahlekelwa umncintiswano. Kepha umncintiswano vele awenzi ukuthi "isayithi lakho livele phezulu kwemiphumela yezinjini zokusesha ngenxa yamagama asemqoka noma amabinzana" kepha kungenxa yokwakha "okuqukethwe kwekhwalithi engcono kakhulu ehlangabezana nezidingo zabafundi".
Feb 26, 2013 ngo-1: 30 AM
Sawubona Douglas, lokhu kungenye ye-infographic ehamba phambili. Ngifunde izinto eziningi ze-seo ukuthola izibuyekezo ezintsha ze-seo, kepha ngikuthanda kakhulu lokhu, ngoba ngale infographic, ngikwazi kalula mayelana nokuhlukile phakathi kokuvuselelwa okudala nokusha kwe-seo. Ngiyabonga uDouglas ngokwabelana ngale infographic enhle.
Feb 26, 2013 ngo-2: 09 AM
Kuyesabeka! I-infographic ekhethekile ibukeka njengomthombo onamandla wokwazi ubuso obusha be-SEO. Douglas, ukhombise ubuhlakani obuyiqiniso kulo mthombo. Kuhle impela.
Sep 5, 2013 ku-1: 16 AM
Sawubona Douglas, I-infographic enhle. indoda eningi ingavuselela isu elisha kepha lena kulula futhi ingcono kunenye.
Ukuthuthukiswa kwe-IOS APP
Dec 17, 2013 ku-6: 26 AM
yini okuqukethwe okuhle ngempela okumangazayo lokhu kuyingqayizivele emangalisayo ye-infographic enhle sibonga ngokwabelana
Jan 3, 2014 ku-8: 13 AM
I-infographic enhle, izithombe ………………………………
Jul 13, 2016 ku-2: 06 AM
I-SEO ishintshiwe ngempela manje izinsuku. Kufanele ushintshe isu lakho lokwandisa isiza sakho ezinjini zokusesha ezahlukahlukene futhi nezwe lanamuhla izingosi zokuxhumana zibaluleke kakhulu kusayithi lakho. Lezi zeluleko ezingenhla zithakazelisa kakhulu. Siyabonga ngamathiphu amahle futhi alusizo.